Qaxooti Soomali ah oo wadankoodii ku laabanaya - Wargeyska Faafiye
Qaxooti Soomali ah oo wadankoodii ku laabanaya
Qaar ka mid ah dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Xeryaha qaxootiga Dha-dhaab ee dalka Kenya, ayaa qorsheynaya sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen dalkooda Soomaaliya kaddib markii ay bilaabeen in ay is diiwaangeliyaan dadkaasi.
Hey’adaha ka shaqeeya diiwaangelinta qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya in ay dalkooda ku laabtaan kuna sugan xeryaha qaxootiga Soomaalida Dha-dhaab ee dalka Kenya, ayaa sheegay in ay heleen liiska ku dhowaad 2,000 oo dad Soomaaliyeed ah isla markaana doonaya in ay dalka Soomaaliya ku laabtaan, si ay uga mid noqdaan qaxootiga sannadka soo socda loo soo rari doona gudaha Soomaaliya, waana heshiis ay wada gaareen dowadaha Soomaaliya iyo Kenya.
Dad badan oo ku sugan Xeryaha Dha-dhaab ayaa codsaday in lagu daro liiska dadka dib u dejinta loogu sameyn doono deegaannadii ay ka soo carareen markii hore ee Soomaaliya, waana arrin ku cusub xeryaha qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsHub lagu qabtay Masjid ku yaala Muqdisho.Sacuudiga: Dab ay ku dhinteen 11 qof.M/weynaha oo la kulmay safiirka EU.Why are journalists being denied access to the ‘liberated’ Kismayo?Somali children's center is likely to replace 400 Bar.